युगसम्बाद साप्ताहिक - सरकार सरकार जस्तो भएन
सरकार सरकार जस्तो भएन
Tuesday, 01.05.2016, 11:35am (GMT+5.5)
यतिबेला मुलुक प्राकृतिक र मानव सिर्जित संकटको सामना सकिनसकी गरिरहेको छ । वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पले उत्पन्न मानवीय संकट अरु चुलिने क्रममा छ । सरकारले समयमै काम थालेको भए भूकम्प पीडितहरु यो जाडोमा ज्यान जोगाउन संघर्ष गर्नुपर्ने थिएन । अहिलसम्म भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको पुनःनिर्माण र पीडित जनतालाई राहत दिने कुरा गफमै सीमित छ । पीडितलाई न्यानो कपडा किन्न दिने भनिएको १० हजार रुपैयाँ बल्ल गाउँघरमा पुग्न थालेको छ । यसबीचमा भारतको नाकाबन्दीले अर्को संकट थपेको छ र यति बेला मुलुकमा गम्भीर मानवीय संकट उत्पन्न हुन थालेको छ । यो संकट वस्तु तथा सेवाको अभावले नभएर सरकारको नालायकीले गर्दा सिर्जिएको हो ।
सरकारको पहिलो प्राथमिकता भूकम्पबाट उत्पन्न संकट समाधान गर्ने हुनुपथ्र्यो । तर, त्यसो हुन सकेन । यतिबेला भूकम्प पीडितका लागि खर्च गर्ने भनेर झण्डै एक खर्ब रुपैयाँ ढुकुटीमा थुप्रिएको छ । काम गर्न कला र सीप नभएपछि स्रोत भएर मात्रै केही हुँदो रहेनछ भन्ने ज्वलन्त दृष्टान्त अहिलेको सरकार बनेको छ । नाकाबन्दीको बिरोध, मधेश आन्दोलनको बिरोध गरेर जनतालाई राष्ट्रियताको पाठ पढाउनेहरु आफूसंग भएको स्रोतको उपयोग गर्न किन सकिरहेका छैनन् ? पीडितलाई घर बनाउन दिने भनिएको दुई लाख रुपैयाँ समयमै उपलब्ध गराइएको भए मानवीय संकट उत्पन्नै हुने थिएन ।
भूकम्प गएको आठ महिनापछि पुनःनिर्माण प्राधिकरणले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाएको छ । अब काम अघि बढ्ने बताइए पनि यसअघि किन काम भएन । सरकारले घोषणा गरेको १० हजार रुपैयाँको पछिल्लो अनुदान दिन किन ढिलाई भयो ? न राजनीतिक तहले कुनै चासो दिएको छ न त कर्मचारी प्रशासनले नै । अहिलेकै अवस्था अरु लम्बिने हो भने भूकम्प पीडित अरु कतिको ज्यान जाने हो पत्तो छैन । प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको दुई महिनापछि गाउँघरमा पैसा जान थालेको छ । नेपालमा सबभन्दा धेरै बिक्ने भनेको नेताको भाषण हो । भाषणमा अनेक योजना सुनाउनेहरु शासन सत्तामा पुगेपछि शून्य क्षमताका हुने गरेका छन् । उनीहरु आफन्तलाई पोस्नमै बढी तल्लिन हुने गरेका छन् । अनेक बहानामा आफ्ना निकटहरुलाई लाभदाी ठाउँमा पठाउनु र आफ्नो बन्दोबस्ती गर्नु नै सरकारमा बस्नेहरुको दिनचर्या हुने गरेको छ । यही अवस्था रहने हो भने दाताहरुले कबोल गरेको चार सय अर्ब रुपैयाँको सहयोग रोकिन सक्छ । त्यस्तै सम्झौता भैसकेका अन्य सहयोग रकम पनि रोकिन सक्छ । भएको स्रोतको उपयोग गर्न नसक्ने सरकारलाई पैसाले पुर्नुको कुनै अर्थ छैन ।
मधेश आन्दोलन र भारतको नाकाबन्दीले मुलुक अकल्पनीय संकटको घेरामा बेरिंदै राजनीतिक अस्थिरता मात्र हैन कि मुलुकको एकता नै खण्डित हुने डरलाग्दो परिस्थिति सिर्जना हुँदैछ । सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरुले नाकाबन्दी बिरुद्ध राष्ट्रियताका चर्का कुरा गरे पनि आम जनताले अब पत्याउन छाडेका छन् । सरकार कसरी आफूलाई जोगाउने भन्ने ध्याउन्नमा छ । भीमकाय मन्त्रिमण्डल बनेको छ । मन्त्रीहरु जति थपिए पनि जनताले केही पाउने छाँटकाँट छैन । बजारमा अत्यावश्यक बस्तुको कालोबजारी चलेको छ । सरकारमा संलग्नहरु नै कालोबजारलाई प्रोत्साहित गरिरहेको र कमिशन खाइरहेको चर्चा व्याप्त छ । किनभने अझै पनि सिंहदरबारमा छिर्नेहरुको अनुहार बदलिए पनि प्रवृत्ति बदलिन सकेको छैन । यति ठूलो संकट मुलुकले भोगिरहेका बेला सरकारले जनतालाई कुनै सेवामा राहत दिन सकेको छैन । भूकम्प पीडितलाई चिसोमा कठ्यांग्रिएर मर्न बाध्य पार्ने सरकारले अहिले देखिएको कृतिम अभाव, अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि र कालोबजारीलाई रोक्न सकेका छैन । सरकारी निकाय नै कालोबजारीमा सक्रिय रहेका छन् । जनताको नाममा जनतालाई ठग्ने धन्दा मौलाएको छ ।
के सरकार, राजनीतिक दल, प्रशासन सबै मिलेर देशमा मानवीय संकट उत्पन्न गराएर राष्ट्र नै विघटन गराउने खेलमा लागेको हो ? हैन भने यति अस्तव्यस्त त मुलुकमा १० वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व चर्केका बेलामा पनि भएको थिएन । अहिले इतिहासमै पहिलोपटक संविधानसभाले संविधान जारी गरेको देशमा यस्तो अवस्थाको सिर्जना हुनु र त्यसको सामना गर्ने कुनै नीतिगत क्षमता प्रदर्शन सरकारले नगर्नुलाई सरकार आफैं मानवीय संकट उत्पन्न गर्दैछ भन्न गाह्रो छैन । यो क्रम कहिलेसम्म चलिरहने ? अरु कतिको ज्यान गएपछि सरकारले भूकम्प पीडितको उद्धार गर्ने, सडकमा जनता कालोबजारी बिरुद्ध नउठेसम्म सरकारले केही नगर्ने हो कि ? कहाँ गए राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरु, जो राजनीतिक स्वार्थका लागि सडकमा टायर बाल्न उत्रन्थे, तिनीहरु आज कुन दुलोमा छन् । देश कालाबजारीयाको कब्जामा जाँदा पनि उनीहरु किन मौन छन् ?